ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် နစ်ဆန်းဂျတ် ကားများ | နစ်ဆန်းဂျတ် ကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
အထူးသီးသန့်(2)
Lks 310 ညှိနှိုင်း
Red Nissan Juke 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလု...
Lks 450 ညှိနှိုင်း
Pearl white Nissan Juke 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start.ေ...
Black Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 290 ညှိနှိုင်း
Grey Nissan Juke 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝ...
Lks 324 ညှိနှိုင်း
Lks 330 ညှိနှိုင်း
MMM Car Sales Center
Silver Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Lks 395 ညှိနှိုင်း
Red Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 398 ညှိနှိုင်း
Red Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလု...
Lks 340 ညှိနှိုင်း
Silver Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်...
Lks 415 ညှိနှိုင်း
Brown Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 350 ညှိနှိုင်း
Black Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Pass...
Lks 358 ညှိနှိုင်း
Nissan Juke Turbo 2011
Lks 335 ညှိနှိုင်း
Myanmar SEG Co., Ltd.
Grey Nissan Juke Turbo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေး...
Grey Nissan Juke Turbo 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 315 ညှိနှိုင်း
Red Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Lks 385 ညှိနှိုင်း
Wun Yan Kha Services
Pearl white Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start.ေ...
Lks 345 ညှိနှိုင်း
Lks 358 Drive Away
* Nissan Juke For Car Sale * ရန်ကုန်လိုင်စင် နောက်ဆုံးနံပါတ်ရပါမည် Nissan Juke RX Grade Model - 2011 License - YGN Last Number Auction Grade4Mileage - 76000 km Eng: Power - 1500 Cc Original ...
Lks 365 ညှိနှိုင်း
* Nissan Juke For Sale * ရန်ကုန်လိုင်စင် နောက်ဆုံးနံပါတ်ရပါမည် Nissan Juke RX Grade Model - 2011 License - YGN Last Number Auction Grade4Mileage - 76000 km Eng: Power - 1500 Cc Original Nissan ...
Lks 318 ညှိနှိုင်း
Black Nissan Juke 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်း...
Lks 300 ညှိနှိုင်း
Hlaing Broker Market
Black Nissan Juke 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်း...
Lks 250 ညှိနှိုင်း
White Nissan Juke 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: Passenger. ပြတ...
White Nissan Juke 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,Original TV,Push Start,Smart Key,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Lks 230 ညှိနှိုင်း
white Nissan Juke 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Push Start,Smart Key,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 240 ညှိနှိုင်း
နစ်ဆန်း ဂျတ်ကားတွေဟာ မီနီကားအမျိုးအစားဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မီနီကား အမျိုးအစားလည်းဖြစ်တဲ့ အပြင် စပေါ့ယူတယ်လတီဗီကယ် လို့ခေါ်တဲ့ အက်စ်ယူဗီကား အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဂျပန်နစ်ဆန်းရဲ့ ကားတစ်စီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ လောက်ကမှ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကားရဲ့ ရုပ်သွင် ကိုယ်ထည်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံစံတစ်ခု အနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ကမှ ဂျနီဗာ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲမှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ရရှိလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းနောက်ပြီးတော့ မြောက်အမေရိကရဲ့ ၂၀၁၀ မော်တော်ရိူးမှာလည်း ပါဝင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လူစီး သိပ်မတွေ့ရတဲ့ ယာဉ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်လျက်ရှိပြီး ဌင်းကားတွေဟာ ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ တော်တော်လေးကို ခေတ်ဆန် ဒီဇိုင်းဆန်ပြီး ယာဉ်ပျံတစ်စီးနဲ့တောင် တူပါသေးတယ်။ ၂၀၁၀ ကမှာ စထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ရေကြည့်ရင် သိပ်ပြီး မကြားသေးပါဘူး။ ထိုအတွက်ကြောင့်လည်း ပုံဆန်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ဂျွန်လလောက်မှာတော့ ဌင်းရဲ့ မိခင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မှာ စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စစချင်း ပထမလမှာတင် အစီးရေ ၁သောင်းကျော်လောက် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင်တော့ နစ်ဆန်းရဲ့ လစဉ် ရည်မှန်းထားတဲ့ ကားရောင်းချမှု စံချိန်ကို ကျော်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်တာမှ တော်တော်ကျော်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် လအနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ နစ်ဆန်း ဂျတ်ရဲ့ ရောင်းအားဟာ ပိုလိုတောင် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ကနေစထုတ်ထားတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်းမှာလည်း ၂၀၁၀ မော်ဒယ်၊ ၂၀၁၁ မော်ဒယ်၊ ၂၀၁၂ မော်ဒယ်၊ ၂၀၁၃ မော်ဒယ်၊ ၂၀၁၄ မော်ဒယ် စတဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း ဂျတ်တွေဟာ ကားအရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင် ရရှိနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်ဆန်း ဂျတ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အနေနဲ့ နစ်ဆန်း ဂျတ်မှာ အင်ဂျင် အမျိုးအစား ငါးမျိုးလောက်ရှိပါတယ်။ နေရာတွေကို တင်ပို့မှုပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ၁၆၀၀ စီစီ၊ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် မှာ ၁၆၀၀ စီစီ အင်လိုင်း ၄ ဖြစ်ပြီး အင်လိုင်း ၄ကိုမှ တာဗို့ အင်ဂျင်တွေ ပါတာလည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီကိုမှ အင်လိုင်း ၄ တာဗို့ဒီဇယ်၊ ကော်မွန်ရေးနဲ့ လာပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည် ပါဝါတွေဟာလည်း အင်ဂျင် အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး အနည်းငယ်ကွဲနေပါတယ်။ ဒီဇယ် တာဗို့အင်လိုင်း ပါတာကတော့ ၈၁ ကီလိုဝပ် ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုး အင်လိုင်း ၄ ပါရှိတဲ့ ၁၆၀၀ စီစီအင်ဂျင်တွေကတော့ ၆၉ ကီလိုဝပ်၊ ၈၆ ကီလိုဝပ် အစားစား ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာလာတာတွေကတော့ အင်လိုင်း ၄ ပါဝင်တဲ့ ၁၆၀၀ စီစီတွေ ဖြစ်ပြီး တာဗို့ အင်ဂျင် ပါတဲ့ ၁၆၀၀ စီစီတွေလည်း လာပါတယ်။ အကုန်လုံးသော အင်ဂျင်တွေကတော့ ရှေ့ဘီးမောင်းတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ လာတဲ့ ၁၆၀၀ စီစီ တာဗို့ ချာဂျာပါဝင်တဲ့ အင်လိုင်း ၄ တွေမှာ လေးဘီးမောင်း စနစ်ရပါတယ်။ ဂီယာ အနေနဲ့ မန်နျူးယယ် ၅ချက်ထိုး၊ ၆ချက်ထိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အော်တို ဂီယာတွေလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်းမှာ တာဗို့ချာဂျာပါဝင်တဲ့ အင်ဂျင်တွေက အလျှင်မြန်မြန်ပြေးနိုင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ရိုးရိုး အင်လိုင်းကတော့ နည်းနည်းနှေးပါတယ်။ သိပ်တော့ မကွာပါဘူး။ ၃၊ ၄ စက္ကန့်လောက်တော့ အမြန်နှုန်းမှာ ကွာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နစ်ဆန်း ဂျတ်တွေဟာ နစ်ဆန်းရဲ့ လိုင်းမှာ ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုနဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ဖက် ဒီဇိုင်း အနေနဲ့ နစ်ဆန်း ဂျတ်မှာ မီးလုံးတွေကို ကားတွေတိုင်းထက် ထူးခြားစွာ ပုံသွင်း ဒီဇိုင်းဆန်းထားပါတယ်။ ကားရဲ့ ဘန်ဘားမှာမှ တစ်ခါတည်း မြူခွဲမီးတွေကိုတစ်ခါတည်း တပ်ဆင်ထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ရိုးရိုး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ မီးလုံးကတစ်မျိုး၊ မီးလုံး အ၀ိုင်းကြီးကတစ်မျိုးနဲ့ မီးလုံးနှစ်စုံလို့ ရုတ်တရက် ထင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဌင်း မီးနှစ်စုံရဲ့ အောက်ဖက်မှာလည်း သတ်သတ်မီးကြောင်းတွေ ပါရှိပါသေးတယ်။ လူငါးယောက်စီးကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဖက် က ဟတ်ဘတ်နောက်ပိုင်းနဲ့တူပြီး မီနီ အက်စ်ယူဗီဆိုပေမဲ့ ဟတ်ဘတ်ပုံစံ ဆင်နေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဖက် အပြင်ပိုင်မှလည်း တစ်ခြား မော်ဒယ်တွေနဲ့မတူတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ကနေ နစ်ဆန်းဂျတ်ကို ကြည့်ရင် ကားခေါင်းမိုး ပျောက်နေသလိုထင်ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ မီးလုံးတွေကလည်း ကိုယ်ထည်နဲ့လိုက်အောင် ဆင်ပေးထားပါတယ်။
အတွင်းပိုင်းနေနဲ့ အတွင်းမှာ လူ ငါးယောက်ထိုင်လို့ ရပါတယ်။ ကားရဲ့ ဒတ်ရ်ှလုတ်ကို ၀ိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းက မော်ဒယ်မြင့်ပါတယ်။ တံခါး လက်ကိုင်တွေမှာ အလူမီနီယံ ကွင်းစွပ်တွေကိုပါ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီတွေ ပါပြီး ကျွန်းခွက်တွေနဲ့ အလှဆင်ကွပ်ထားပါတယ်။
အင်ဂျင် ၁၃၀၀ စီစီ မဟုတ်ဘဲ ၁၅၀၀ စီစီ ဒီဇယ် တာဗို့ အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ အပြင် ၁၆၀၀ စီစီ တာဗို့ အင်လိုင်းတွေ ဖြစ်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကား ဒီဇိုင်း ဆန်းသစ်ပြီး နည်းပညာမြင့်ကားတစ်စီး ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာလည်း နည်းပညာမြင့်အစိတ်အပိုင်းတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တီဗီ၊ နာဗီဂေ့ရှင်း၊ ပါဝါလောခ့်၊ ပါဝါ စတီယာရင်၊ လေအိတ်၊ အနောက်ကင်မရာ၊ ပါဝါ၀င်းဒိုး၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စနစ်တွေပါ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါဝင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်ဆန်း ဂျတ်တွေဟာ ၂၀၁၀ ကနေစပြီး ထုတ်တာ ဖြစ်လို့ ပြည်တွင်းမှာ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၃ လောက်ထိကို သိသာစွာ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ဖြစ်တဲ့ နစ်ဆန်း ဂျတ်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ၂၅၀ ကျပ်သိန်း လောက်ကနေ ၄၅၀ လောက်ထိကို အနည်းဆုံး ပျဉ်းမျှရှိတဲ့ ကားတွေ ဖြစ်ပြီး အသစ်ဖြစ်တဲ့ ဘ၇န်းနယူးကားတွေကတော့ ထိုထက်ပိုပြီး ဈေးပိုမြင့်မားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခြား ရိုးရိုးနစ်ဆန်းကားမော်ဒယ်တွေထက် ဈေးပိုမြင့်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နစ်ဆန်း ဂျတ်တွေဟာ အိမ်စီး ကားအသေးစားကားတွေထဲမှာ ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်မားနေတာကလွဲလျှင် သုံးဖို့သင့်တဲ့ကားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ နှစ်မျိုးလုံးကို ရရှိနိုင်ပြီး မန်နျူးယယ်၊ အော်တို ဂီယာနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံစံဆန်းပြီး ရသတစ်ခုကို ပေးမဲ့ နစ်ဆန်း ဂျတ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်မျိုးစုံကိုလည်း ရနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွင်း ဒီဇိုင်း ဆန်းဆန်းနဲ့ တစ်မူထူးလိုသူတွေ အဖို့ နစ်ဆန်း ဂျတ်က အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..